आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२९ वैशाख २०७९ बिहीबार, १२ मे २०२२) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२९ वैशाख २०७९ बिहीबार, १२ मे २०२२)
२९ बैशाख २०७९, बिहीबार ००:१४
श्रीशाके १९४४ नेपाल सं. ११४२ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७९ वैशाख २९ गते बिहीबार तद्अनुसार सन् २०२२ मे १२ तारिख वैशाख शुक्लपक्षको एकादशी तिथि उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र हर्षण योग बब करण आनन्दादिमा मातङ्ग योग चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१९ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४३ मा हुनेछ । मोहिनी एकादशीव्रत ।
मेष – आज सोचेभन्दा कमै फाइदा मिल्नेछ । तर भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा अनुकूलता बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सन्तान आदिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुका साथै विविध कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । आँट साहस उत्साह थपिनेछ ।
वृष – आज मनोकूलको काम बन्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । तर सरसापटमा धन खर्च हुने समय छ । भौतिक साधन जुट्नेछ भने आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । आयआर्जन राम्रै हुनेछ । विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि अरूको मुख ताक्ने बानीले काममा धोका हुन सक्छ । बौद्धिक र सृजनात्मक काम होला । कार्यगति बढ्ला । खेलकुद र भ्रमण आदिमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मिथुन – भागदौड वृद्धि भए पनि आज एउटै कामबाट दोहारो लाभ मिल्न सक्छ । प्रतिभाको कदर हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ । दिगो आम्दानी हुने काम सुरु गर्ने मौका छ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । उत्साह बढ्नेछ । रोकिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । सुख प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट – नयाँ सम्भावना रहेको दिन छ । इष्टमित्र, सन्तानको सुख प्राप्त हुनेछ । भाग्योन्नतिको समय छ। धेरैको भलाइ हुने काम शुभारम्भ गर्न सकिनेछ । तथापि, अरूको भर पर्दा धोका हुन सक्छ । परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ । मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ, सावधानी अपनाउुहोला । पहिलेको उपलब्धिले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ । रचनात्मक र बौद्धिक क्षमता बढ्नेछ । शुभ काममा आकर्षण बढ्नेछ । धन बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
सिंह – आर्थिक कार्यमा सफलता हासिल हुनेछ । तर अवसर आए पनि मौकामा लाभ उठाउन नसकिएला । ठूलै प्रयत्न गर्दा सामान्य फाइदा हुनेछ । हठ गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ । अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । सन्तानसुख बढ्नेछ । हासविलासमा रुचि बढ्नेछ ।
कन्या – आरोग्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिने योग छ, सचेत रहनुहोला । प्रतिस्पर्धामा पनि केही कमजोर सावित भइएला । महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नु नै बेस होला । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । यात्रा हुनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ ।
तुला – यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । आफन्तको साथ प्राप्त हुनेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ । कामबाट फुर्स्दिलो भइनेछ भने अतिथिका रूपमा सत्कार समेत पाइने सम्भावना छ । प्रयत्न गर्दा घरेलु काममा फाइदा पुग्ने समय छ । शारीरिक र आर्थिक काममा प्रगति होला । शैक्षिक, बौद्धिक, कलात्मक, गीतसंगीत आदि कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ ।
वृश्चिक – मान महत्व र विद्या बढ्नेछ । प्रशस्तै धनलाभको योग छ । आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउन सक्छन् । बन्ने निश्चय भएको काम अचानक बिग्रन सक्छ । व्यावसाय विस्तारका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । यात्रापरक काम बन्नेछ । दूरदेशबाट शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ ।
धनु – स्वास्थ्य कमजोर रहनाले जोश(जाँगरमा कमी आउनेछ । पठनपाठनमा समय दिन नसकिएला । न्यून उपलब्धिका लागि पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनुहोला । यसका बाबजुद शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ ।
मकर – यात्रामा सफलता मिल्नेछ । नयाँ काम गर्ने समय आएको छ, तर काममा सफलता पाउन केही प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ । शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले चुनौती समेत सामना गर्नपर्ला । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । सन्तानसुख बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । मान महत्व बढ्ला ।
कुम्भ – काममा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन् । मिठो बोलीको माध्यमले धेरैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सकिनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । अरुको भरमा नबसी आफ्नै बल र विवेकले काम गर्नुहोला ।
मीन – स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्नेछ । आफन्तबाट टाढिनुपर्ने समय छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट भने सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ । सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ । सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्नेछ । खर्च बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको बस्तुमा खर्च बढ्ला । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । जीवनसाथीको साथ प्राप्त रहला ।